<p>မြန်​မာနိုင်​ငံရဲ့ ခရီးသွားဘို့အကောင်းဆုံးအချိန်​လေးလည်းဖြစ်​ပါတယ်​နော်​။</p><p><br></p><p>ခရီးတွေထွက်​ပြီး မှတ်​မှတ်​ရရ ကိုယ်​ရောက်​ခဲ့တဲ့နေရာလေး တွေကို မှတ်​တမ်းတင်​ရတာဟာလည်းပျော်​စရာအပြင်​ တနေ့နေ့မှာအမှတ်​ရများကိုပြန်​လည်​ ကြည့်​ရှု့နိုင်​မှာလည်းဖြစ်​ပါတယ်​ ။</p><p><br></p><p>အဲလိုလေးအမှတ်​တရတွေကို မှတ်​တမ်းတင်​နိုင်​ဘို့ကလည်းမိမိဖုန်းက Battery အား ရှိနေဘို့လည်းလိုပါတယ်​နော။</p><p><br></p><p>ခုလိုခရီသွားရာသီလေးမှာ အဲလို အခက်​ခဲလေးတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်​မဲ့ Power bank လေးတွေကို လက်​ဆောင်​ပေးပြီး မိမိတို့ရဲ့ လုပ်​ငန်းတွေကို မိမိတို့ရဲ့ အမှတ်​တံဆိပ်​ , Company logo , Brand name လေးတွေကို တံဆိပ်​ရိုက်​ပြီး လက်​ဆောင်​ပေးရင်​တော့အထိရောက်​ဆုံးဖြစ်​မှာသေခြာပါတယ်​ လို့ Royal Tiger-Lady က အကြံလေးတွေပေးပါစေဗျ။</p><p><br></p><p>Power bank လေးတွေကို မိမိတို့စိတ်​ကြိုက်​ Customize လုပ်​နိုင်​ပါတယ်​ ဗျ။</p>
<p>Pizza လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် လူကြီးမင်းတို့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသယ်ယူနိုင်ရန် အဆင်မပြေဖြစ်နေပါသလား?</p><p>Royal Tiger-Lady မှာ</p><p>- Food Box</p><p>- Pizza Box</p><p>- Cake Box</p><p>- Soap Box&nbsp;</p><p>- T-Shirt Box</p><p>- Shoe Box, . . . etc.</p><p>Carton အသားနဲ့ ဆေးရိုက်ပါအပြီးအစီ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီဗျ။</p><p><br></p><p>ဈေးနှုန်းလေးတွေသိရှိလိုပါက မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ ဆိုဒ် ပုံစံလေးပြပေးပြီး အရေအတွက်လေးပြောပေးပါက ဈေးနှုန်းလေးတွက်ပေးပါတယ်ဗျ။</p>
<p>လူကြီးမင်းတို့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသယ်ယူနိုင်ရန် အဆင်မပြေဖြစ်နေပါသလား?</p><p>Royal Tiger-Lady မှာ</p><p>- Food Box</p><p>- Pizza Box</p><p>- Cake Box</p><p>- Soap Box&nbsp;</p><p>- T-Shirt Box</p><p>- Shoe Box, . . . etc.</p><p>Carton အသားနဲ့ ဆေးရိုက်ပါအပြီးအစီ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီဗျ။</p><p><br></p><p>ဈေးနှုန်းလေးတွေသိရှိလိုပါက မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ ဆိုဒ် ပုံစံလေးပြပေးပြီး အရေအတွက်လေးပြောပေးပါက ဈေးနှုန်းလေးတွက်ပေးပါတယ်ဗျ။</p>
<div>လူကြီးမင်းတို့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသယ်ယူနိုင်ရန် အဆင်မပြေဖြစ်နေပါသလား?</div><div>Royal Tiger-Lady မှာ</div><div>- Food Box</div><div>- Pizza Box</div><div>- Cake Box</div><div>- Soap Box&nbsp;</div><div>- T-Shirt Box</div><div>- Shoe Box, . . . etc.</div><div>Carton အသားနဲ့ ဆေးရိုက်ပါအပြီးအစီ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီဗျ။</div><div><br></div><div>ဈေးနှုန်းလေးတွေသိရှိလိုပါက မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ ဆိုဒ် ပုံစံလေးပြပေးပြီး အရေအတွက်လေးပြောပေးပါက ဈေးနှုန်းလေးတွက်ပေးပါတယ်ဗျ။</div>
Shoe Box အမျိုးမျိုး
<p>လူကြီးမင်းတို့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသယ်ယူနိုင်ရန် အဆင်မပြေဖြစ်နေပါသလား?</p><p>- Food Box<br></p><p>- Pizza Box</p><p>- Cake Box</p><p>- Soap Box&nbsp;</p><p>- T-Shirt Box</p><p>- Shoe Box, . . . etc.</p><p>Carton အသားနဲ့ ဆေးရိုက်ပါအပြီးအစီ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီဗျ။<br></p><p>ဈေးနှုန်းလေးတွေသိရှိလိုပါက မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ ဆိုဒ် ပုံစံလေးပြပေးပြီး အရေအတွက်လေးပြောပေးပါက ဈေးနှုန်းလေးတွက်ပေးပါတယ်ဗျ။<br></p>
Paper Lantern with LED for Festival (အလှဆင်မီးပုံများ)
<p>သီတင်ကျွတ် အခါသမယမှာ Paper Lantern with LED မီးများဖြင့် အလှဆင်ပြီ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရယူနိုင်ပါစေ။</p><p><br></p><p>လူကြီးမင်းတို့၏ နေအိမ်၊ ရုံးခန်း၊ ဆိုင်နေရာများနှင့် Company အရှေ့များတွင် Paper Lantern With LED မီးပုံများဖြင့် အလှဆင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ Royal Tiger Lady ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။</p>
Candles with glass
<p>ဒီနှစ် သီတင်ကျွတ်မှာ Company မှ လူကြီးများကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ စဉ်းစားရကြပ်နေပါသလား။</p><p>Candles with glass အလှဆင် ဖယောင်တိုင်များဖြင့် မီးပူဇော်ရန် ရွေးချယ်လိုက်ပါ။</p><p>- လူကြီးမင်းတို့ ထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေ နှင့် Company logo , Brand Name , Brand Logo, Product Name , Product Logo များကိုပေါ်မှာတံဆိပ်ရိုက်ပြီးလက်ဆောင်းလေးတွေ ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ Royal Tiger Lady ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါခင်ဗျာ။</p>
Umbrella Printing အမျိုးမျိုး
<p>- မိုးတွင်းရာသီလည်းရောက်လာသလို သားသားမိမိတို့ အတွက် ကျောင်းဖွင့်ရာသီလည်းရောက်လာပါပြီ နော်။</p><p>- ခုလိုမိုးရာသီမှ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကြော်ငြာနိုင်ဖို့အတွက်ဆို ထိရောက်မှု့ရှိပြီး effectives ဖြစ်စေမဲ့ umbrella လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။</p><p>- လူကြီးမင်းတို့ ထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေ နှင့် Company logo , Brand Name , Brand Logo, Product Name , Product Logo များကို Umbrella ပေါ်မှာတံဆိပ်ရိုက်ပြီးလက်ဆောင်းလေးတွေ ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အထိရောက်ဆုံးဖြစ်မှာ သေခြာပါတယ်ဗျ ။</p><p>- Umbrella ကို လည်း 8K Umbrella , 16K Umbrella ဆိုပြီးရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ ။</p><p>- အရွယ်အစားတွေကတော့ လူကြီးတစ်ယောက်ဆောင်းထီးကို 23" / 25" / 27~30" ဆိုပြီးလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသေးတယ်ဗျ ။</p><p>- အရေအတွက်အနည်းဆုံး အချောင်း 100 ကနေစတင်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။</p>
Rain Coat အမျိုးမျိုး
<p>- မိုးရာသီမှာ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Promotional product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rain coat လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်ပါ တယ်ဗျ ။</p><p>- Yangon ရဲ့ ရာသီဥတုမှာ ကားစီးရတာလည်းအဆင်ပြေ မိုးရွာတော့လည်း လုံခြုံမှု့ရှိပြီး သယ်ယူလို့လည်းအဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။</p><p>-